Itoobiya iyo Kenya oo la kala safan dhinacyada isku haya doorashada J/land & shaki jira – Xeernews24
Itoobiya iyo Kenya oo la kala safan dhinacyada isku haya doorashada J/land & shaki jira
18. August 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Ammaanka goobaha lagu qabanayo doorashooyinka Maamulka Jubbaland waxaa si wadajir ah u ilaalinaya Ciidamada Booliska Jubbaland, Ciidamada Kenya,iyo Itoobiya oo ka wada tirsan Howlgalka Midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya.
Su’aasha taagan ee dadka waxgaradka ahna ay isweydiinayaan ayaa waxay tahay Kenya iyo Itoobiya daacad maka tahay in doorashada Jubbaland si xor oo xalaal ah ay ku dhacdo iyagoo aan wax faragelin ah sameyn.
Khaalid Macalin oo ka mid ah Macalimiinta Wax ka dhiga mid ka mid ah Jaamacadaha ku yaalo magaalada Muqdisho ayaa qaba aragtida ah in Kenya iyo Itoobiya aysan daacad ka ahayn doorashada Jubbaland,islamarkaana la kala safan yihiin dhinacyada doorashada isku haya (Axmed Madoobe iyo Dowladda federaalka).
Sidoo kale, Xasan Nuur oo ah Falanqeeye Siyaasadeed ayaa sheegay in Ciidankaasi ay yihiin ciidan ku shaqeeya Mandate-ka AMISOM,islamarkaana la amro,sidaasi daraateedna wixii la faro un ay fulinayaan,mana jirto sida kastaba ha ahaateen faragelin uga banaan doorashada Jubbaland.
Docda kale, Dowladda federaalka oo dooneysa inuusan loo laaban Axmed Madoobe ayaa adeegsaneysa Dowladda Itoobiya si ay meesha kaga saarto xukunka 7-sanno jirsaday ee Jubbaland loona keeno weji cusub oo fuliya amarada ka soo baxa Villa Soomaaliya.
Beesha caalamka ayaa u muuqata mid fulineysa rabitaanka Villa Soomaaliya oo qaadeysa tallaabooyin u ek kuwii ay qaadayeen Farmaajo iyo Kheyre.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/08/Baarlamaanka-Jubabbaland-amin-arts.jpg 388 600 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-08-18 13:20:572019-08-18 13:30:49Itoobiya iyo Kenya oo la kala safan dhinacyada isku haya doorashada J/land & shaki jira
Madaxda Boqor Salmaan Qaabilay oo kornayl Muuse Biixi Laga Reebay. Madaxweyne Farmaajo oo si heer hoosa ah loogu soo dhaweeyay Jabuuti (Daawo ...